HPL / Avo nanery laminate taratasy - China Weifang Ranomasina Joy Trade
.Import loko taratasy sy 100% phenolic resin ny Avo tsindry taratasy foana laminate asa fanompoana izay kalitao ambony vokatra.
Product HPL / Avo nanery laminate taratasy
Material Phenolic resin + Kraft taratasy
1220mm * 2440mm (4 '* 8') - Normal habeny
Color varimbazaha hazo loko. mafy loko.
surface Treatment Matt, Emboss, mihasimba, Wood Embossing, malamalama, sns
Application High quality HPL ireo fitaovana fandravahana, izay ampiharina amin'ny trano fidiovana be fisarahana, fisarahana birao, fanaka, lakozia kabinetra, cupboard, countertop, varavarankely, varavarana hoditra, rindrina soson'ny, valin-drihana, miantsena mety, shelving, sns
fonosana: Mifono ny hazo pallets na araka ny mpanjifa "fepetra manokana.
1.Resistant atao amin'ny afo, hafanana, rano, scratches; anti-voasakantsakan'ny, soundproof
2.Durable, fa tsy mora lefy mba hanaratsy na
3.Environmental fiarovana, tsy misy poizina na hampiely fananany nivoaka
4.Can ho voahenjana, mamorona streamlined hatsarana.
5.Easy ary mety hanao ny mari sy dingana
6.Varieties ny loko sy ny surface famaranana azo voafidy, fahafaham-po anao ny favoris.
7.Easy madio, ny stains dia azo diovina amin'ny alalan'ny lamba malefaka.
8.Favorable vidiny, dia manana tombony mifaninana amin'ny hafa mampitaha ny marika malaza iraisam-pirenena.
1.Import loko taratasy sy 100% phenolic resin ny Avo tsindry taratasy foana laminate asa fanompoana izay kalitao ambony vokatra.
2.Finishied impregnating ny haingon-trano amin'ny alalan'ny taratasy amin'ny melamine sy Kraft taratasy amin'ny phenolic, namaoka sy ny hafanana sy ny tsindry ambony;
3.Outstanding fanoherana abrasion, avo tempreature, maloto, manafintohina, sigara sy misokatra ignition lelafo, mitafy-mahatohitra, afo-mahatohitra, anti-voasakantsakan'ny, simika mahatohitra;
4.Decorative surface fitaovana ho an'ny fampiasana an-trano sy ny ivelan'ny trano, be mpampiasa any ambonin'ny fandravahana ny efitrano, birao, efitrefitra, partitions, lakozia, sideboards, fanaka sy ny laboratoara tampon latabatra;
5.Easy madio, Easy ho tapaka, mora ho lelan-feno milina, Healthiness sy ny fiarovana ny tontolo iainana
1.Your fanadihadiana mifandraika amin'ny vokatra sy ny vidiny dia namaly ao anatin'ny 24hours.
4. rafitra fanaraha-maso ny kalitao Detailed.
6. Manomeza vokatra ho an'ny orinasa fironana maimaim-poana, fahazoan-dalana hidirana ny vokatra sy ny vahaolana araka ny mpanjifa 'tena zava-misy.
10. Tsy manome tolotra maimaim-poana ao Shina lavitra ezaka ho an'ny mpanjifa, toy ny famandrihana trano fandraisam-bahiny, mpitari-dalana, fanampiana fividianana, mijery hafa orinasa vaovao, ary mitady kalitao mpivarotra ny vokatra hafa.
Q1: ny orinasa ve dia orinasa na orinasa ara-barotra?
A1: matihanina orinasa izahay, dia afaka manome vokatra ho anareo amin'ny toetra tsy miovaova ny fotoana rehetra.
Q2: Inona no teny ny fandoavam-bola?
A2: 30% T / T petra-bola tamin'ny voalohany, 70% fifandanjana karama eo anoloan'ny entana. 100% feno fandoavam-bola tamin'ny voalohany mba ho santionany.
Q3: Inona avy ireo fomba fandoavam-bola ny?
Q4: Manaiky T / T, Alipay, L / C, PayPal amin'ny alalan'ny carte de crédit
Q4: Ohatrinona ny vidin'ny sambo?
A4: Mba torohevitra anay ny adiresy na ny toerana halehany seranan-tsambo, dia hisafidy ny tsara indrindra ho an'ny fitaterana fomba. Ary hilaza aminareo ny teti-bola araka ny habetsahany.
Q5: Inona no atao hoe MOQ?
A5: Ny MOQ dia 1 pallet. Tsy misy mba MOQ ny santionany.
Any mampifaly hafatra fanontaniana na miantso ahy. Tena sitrako mba hiasa miaraka aminareo.
Density avo sombiny Board
Haingon-trano ambony Pressure Laminate Board
Pressure avo Laminate Board
Pressure avo Laminate Panels
Hpl Interior handravaka
Laminated sombiny Board
Melamine niatrika sombiny Board
Melamine Laminated sombiny Board
Melamine sombiny Board
Melamine sombiny Board / Pb
HPL Laminated gitara an'i Etazonia / 1220x2440mm Formic ...